Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhora Legend iro rinonyatsozivikanwa nezita reNickname; 'don Andrés'. Our Andres Iniesta Childhood Story Nhoroondo ye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekwanisiro ake asi vashomanana vanofungisisa Andres Iniesta Biography Story iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwose
Andrés Iniesta Lujánwas akaberekwa musi we11th raMay, 1984 mumusha wakazara weFientealbilla, Spain nababa, José Antonio Iniesta (Mongol Mabhizimisi) uye Amai, María Luján Iniesta (muchengeti wemba).
Akaberekwa sevose vane ruzivo uye mwana akapfuma. Vafumi sekuvabereki vake uye neropafadzo kubva kuMuguta wakanaka weAlbacete, Spain. Akakurira mumuganhu weAlbacete unozivikanwa nezvinhu zviviri; yepamusoro yezana yevaSpanish vanotaura newaini yavo yakanaka.
Andres aiva nezvinhu zvose zvaaida uye aida muupenyu semwana muduku. Uyewo, airemekedza chishuvo chevabereki vake kwaari.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Basa Rokutanga
Akatanga kutamba pazera re 10 naAlbacete Balompié, kambani yemunharaunda muguta rake reAlbacete.
Pazera reC12, paaitamba mumutambo, akakurudzira makirabhu ebhora kuAplesia. Vabereki vaInesta vaibvumirana neCc Barcelona muchengeti Enrique Orizola.
Vachifunga kuti mwanakomana wavo aiva nechipo pamutambo uyu, vakaita kuti Orizola afunge kubvuma Iniesta muBarcel Youth Youth Academy.
Muhurukuro yazvino, baba vaIzonesta vanoyeuka nguva yaakabvunzwa .. "Unoyeuka sei nguva iyo Andrés aifanira kutakura mabhegi ake ndokuenda kuBarcelona?". Maererano naye ..Yakanga iri nguva yakareba iyo yaakaita chisarudzo chokupedzisira. Takagamuchira chikwata che FC Barcelona uye aifanira kuenda kuLa Masia, chikwata chechikoro, pachake, sezvo tisingagoni kubva muguta redu re Fuentealbilla. Akange asingadi kusiya mhuri uye akanditaurira zvakajeka kuti haana kuzviona achienda. Ndakamuudza kuti aya marudzi emikana haana kuuya kazhinji, kuti aizowana kugadzikana kwakanaka muyunivhesiti ... Mazuva mashoma mushure mokunge Andrés akauya kwandiri akati: "Baba, ndiri kuenda kuBarcelona". Ndakanga ndavhiringidzika, saka ndakamubvunza kuti sei ainge ashandura pfungwa dzake. Uye akandiudza chimwe chinhu chinotyisa chaizvo. Akati: "Ndiri kuenda, nokuti iwe unoda kuti ndiende, nokuti ndiyo kurota kwako". Kubvira panguva iyoyo ndinogona kutaura kuti ndakadzidza zvinhu zvakawanda kubva kumwanakomana wangu. Akandidzidzisa zvakawanda apo aingova 12 chete.
Akafamba nevabereki vake kuti vashanyire mazita ainzi La Masia academy kune vechidiki vaduku, mushure maro, vabereki vake vakasarudza kunyoresa kuchikoro. Mushure memafupa ake emifananidzo, vabereki vake vakaenda kumusha. Izvi zvakaitika mugore re1996.
Kusiyana nevadzidzi vakawanda, FC Barcelona inotora vatambi vavo vose kubva kunze kweguta mumusha wavo pachavo kubva panguva ye 13 kana 14. Zvisinei, Iniesta aingova 12 uye zvakanga zvisina kujairika kuti kirabhu isayine mumwe munhu wechiduku. Pasinei nezvimwe zvinopesana, boka racho rakaenderera mberi richimushandira uye rinogona kuva nechokwadi chokuti ndiro rimwe remasarudzo akaisvonaka avo vaigona kutora ivo pachavo uye mutambi.
Andres Iniesta Tanga pa FC Barcelona
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -The Difficult Start
Mumwe mukomana wainzi Iniesta akaedza kurarama kure nevabereki vake, aiwanzogara kumba uye akazvichengetera.
Iniesta anoti iye "Akadanidzira nzizi" zuva raakasiya La Masia uye akaedza kurambana kubva kuvabereki vake. Ainyara uye akazvichengeta pachake apo.
Vechidiki Andres Iniesta Vasina vabereki vake
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kukurira Mukurumbira
Akatora gamba reBarcel Under-15 kuti akunde muNike Premier Cup ye1999, achicherechedza chinangwa chinokunda mumugumo wokupedzisira wekupedzisira, uye akatumidzwa kuti mutambi wechikwata. Pasi pane mufananidzo we Guardiola anopa Iniesta, chikwata chake.
Young Andres Iniesta achigamuchira mubayiro kubva Pep Guardiola
Maitiro ake, kuenzanisa uye unyanzvi zvakaita kuti Spain iwane UEFA European Under-17 Championship 2001 uye Under-19 Championship gore rinotevera.
Nenguva iyo Iniesta akauya kushizha, ipapo-mukuru Pep Guardiola akaudzwa nechisimba pamwe naye midziyo Xavi: "Uri kuenda kundisiya. Uyu mukomana [Iniesta] ari kuzotiza isu tose "
Akangopedza kubvisa Guardiola kubva mubasa rake re 11 mumutambo wakatanga kubva ku1990 kusvika ku2001.
Wechiduku Andres Iniesta, achiomanikidza Pep Guardiola kuti aende
Vamwe vose, sezvavanotaura iye zvino nhoroondo.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Andres Iniesta anobva kumudzimai akazvininipisa uye akapfuma. Imwe mhuri yechiSpanishi.
Baba vake vebhizimisi mogul uyo akatanga kubva pakutanga. José Antonio Iniesta akatanga sevashandi vekuvaka asati atora mabhizimisi emabhizimisi. Paainge asina basa rokuita, aiwanzoenda kumhenderekedzo kunoshanda semubatsiri.
Akagara ari mudiwa webhokisi uye akaita zvose zvaakaedza, saka mwanakomana wake Andrés aigona kuveza kurota kwekuva nebhora mutsoka dzake.
José Antonio naAndres
Kubva pamazuva ake okutanga kumusha muduku Fuentealbilla kuSpain kusvikira asvika pamusangano webhokisi yenyika, José Antonio ave ari pedyo nemwanakomana wake.
Andres Iniesta's stong ukama nababa, Jose
Iye anozivikanwa kuchema paanoona mwanakomana wake ari mukurwadziwa kana kukuvadzwa. Maererano naJosé Antonio Iniesta,
"Hungu, zvakawanda. Ndinodanidzira nyore. Ndinodanidzira apo Andres yangu akakuvara kana kumuona mumarwadzo achiziva chimwe chinhu hachisi chakanaka. Kunyanya zvakadaro, paiva nenguva yakawanda yekuchema apo Andrés akanga ari kure nemusha kuti atange basa rake paCc Barcelona. "
Pasinei nokuti uri mune zvishoma zvevatambi vari munyika, Iniesta achiripo ane nguva yebhizimisi remhuri.
José Antonio Iniesta uye Mwanakomana, Andres Iniesta vachiita Bhizimisi reMhuri
Pari zvino, José Antonio anotora chikomborero chemhuri Bodegas Iniesta. Apo vanhu vanomubvunza kuti aenzanise mwanakomana wake newaini, anoti "Ingadai iine waini yakanaka, yakachena uye yakangwara."
Iniesta Sr. anotsanangura kuti mwanakomana wake akangogara achitarisa sei bhora rake uye achiita zvakanaka kwechikwata uye nyika.
"Haana kumbofarira kuva mutungamiri kana mukuru wezvose," anoti. "Kune vatungamiri vanotora basa ravo nekushinga kwavo uye vamwe vanoita saizvozvo nekuzvininipisa kwavo, vanosarudzwa neboka ravo-vakaroorana. Mwanakomana wangu Andres ndiye chete. "
AMAI: María Luján akafananidzirwa pasi apa amai vaAndres Iniesta.
Andres Iniesta naamai, María Luján
María Luján haasi munhu mukuru wevhidhiyo asi mumwe munhu anozivikanwa kuti akatarisa anenge mimwe mitambo yemwanakomana wake ari kutamba kubva pakutanga kwebasa rake.
HANZVADZI SIKANA: Maribel Iniesta ndiye oga hanzvadzi uye hanzvadzi yaAndres Iniesta. Akakurira munzvimbo iyo bhizimisi rewaini richiri kuwedzera. Anofanana naye iye akasiyana nababa vake.
Hanzvadzi yaAndres Iniesta- Maribel Iniesta
Maribel achiri kunamatira kumidzi yake sezvo iye zvino anotarisira kambani yewaini yewaini.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Andres Iniesta's Story Story uye hupenyu hunopoteredza mukadzi mumwe chete. Haasi mumwe kunze kweiye akanaka, Anna Ortiz.
Andres Iniesta's Love Story naAna Ortiz
Anna Ortiz ndiCatalan uye nyanzvi mune unyanzvi hwokuita,
bvudzi rinopfeka, runako uye utano, iye zvino anoshanda semuumbi wekunze muCoton et Bois.
Vanosangana panguva imwe nguva Iniesta akakuvadzwa pamusana wake mugore re2008. Akawira murudo naye apo iye akamupa imwe physiotherapy yehutano.
Muna September 2010 Andrés Iniesta akasimbisa kuti Anna akanga ane pamuviri nemwana wake. Akaberekera Valeria Iniesta Ortiz. Pasi pane mufananidzo weValeria nevabereki vake.
Andres Iniesta, Anna Ortiz nemwanasikana wavo, Valeria
Andres iniesta naAnna Ortiz mushure memakore mana okugara vachifara pamwe chete vakasarudza kuroora mu2012. Kuroorana kwakaitwa paimba yeTamariti pedyo neTarragona.
Pakati pemazita akakurumbira aripo pamuchato uyu ainzi Lionel Messi, uyewo mumwe wepamberi yeBarcelona Samuel Eto'o.
Nguva pfupi mushure momuchato wakaratidza nyaya kune vateveri vake 3.9million pa Twitter, achinyora mufananidzo wega nemudzimai wake uye tweeting: 'Zuva rinoshamisa! Akaroora. '
Muchato waAndres Iniesta Photo
Andres Iniesta nemudzimai wake mutsva Anna Ortiz vakapedza nguva yavo yehusiku pamahombekombe egungwa muCancun, Mexico. Iko, imwe nguva yainge ichangobva kuchata yakaonekwa inofadza zvikuru uye yakasununguka sezvo yainyanya kuisa mamiriro ekunze.
Andres Iniesta achifara nemufaro nemudzimai
Pane 31st yaMay, 2015, Andres naAna vane mwana wechipiri uye mwanakomana wekutanga. Anonzi Paolo Andrea Iniesta.
Andres Iniesta akazara mhuri yemufananidzo
Andres Iniesta ndibaba vakanaka vanoda kupedza nguva yakanaka nevana vavo. Anogara achiedza kurega nyika ichizviziva. Iye mubereki chaiye anoisa vana vake pamusoro pezvaanoda iye oga uye zvaanoda.
Andres Iniest- Iyo Baba Vanochengeta
Kunge Radamel Falcao uye Robert Lewandowski, Andres Iniesta ave akararama upenyu hunofadza hwemhuri.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts-Wine Wine
Hongu, Vakuru vekare Vakuru Premier League Sir Alex Ferguson uye Harry Redknapp vainyatsozivikanwa nokuda kwekuda kwavo waini, asi hapana kana mumwe wavo akafamba kusvika pakuva nemunda wemizambiringa kana wekudya.
Kunyanya zvakadaro, vatambi vemazuva ano vane mikana yekuisa pfuma yavo mumotokari yemotokari kana mafirimu akazara, kunze kwekutsvaga mune chero chinhu seesoteric sekurima mazambiringa.
Asi zvichida zvisingazivikanwi zvakanyanya, nekuda kwekunyarara kwake, naAndres Iniesta avo vakaisa nguva yavo nemari yavo mukugadzira waini.
Andres Iniest- Iwaini yeAvai Wine
Panguva yemuchato wake, akaita kuti vashanyi vake vose vanwe waini yaIniesta iyo inonzi zita rake nemwanasikana wake Valeria.
Bhizinesi rebhizimisi rayo kwaari. Kana iwe waigara kuSpain unogonawo kuona chiso chake chichibvumira kubva kune zviziviso zvinokurudzira waini kubva mubhizimisi remhuri yake, Bodega Iniesta. Iyi ibhizimisi guru uye mhuri yose inobatanidzwa mairi.
Mhuri yaive iine bhizinesi risati rasvika pakubudirira mumutambo webhola, uye sezvaakakura iye avewo akabatanidzwa mukuwedzera kwayo.
Zvechokwadi, Iniesta ndiye chizvarwa chechitatu kubva kumhuri yake kuti atore basa mubhizinesi rewaini, rakasimbiswa naasekuru vake Jose Antonio.
Pamwe chete, mhuri yake inopfuura mashekeri makumi matatu emakiromita eminda yemizambiringa, uye mazambiringa ose anogadzirwa kubva muzvibereko zvaro.
Bhizinesi iri muAlbacete, iri maawa maviri 'motokari kubva kuValencia, uye maawa maviri nehafu kubva kuMadrid, mushamba wayo mukuru. Kambani yake inoshandisa 35 vanhu, 25 mumunda, uye 10 nguva yakazara muminda yemizambiringa apo michero chaiyo yewaini inokohwa.
Andres Iniesta Wine zvibereko
Sezvenguva yekunyora, kambani yake inotengesa waini inotumidzwa mushure mokunda wake Valeria, uye imwe pashure pemwanakomana wake Paolo Andrea.
Akaudzawo imwe yewaini inonzi "116" iyo inorangarira miniti mumutambo paakawana chinangwa chokukunda muChikwata cheHNNX World Cup.
Kakawanda, 1 kusvika mabhodhoro e-1.2 mamiriyoni ewaini inobudiswa mukambani yake pagore. Waini yake inowanikwa munyika ye33, kusanganisira East Asia, kumaodzanyemba, pakati nepakati kuchamhembe kweAmerica, uye kumadokero nekumaodzanyemba kweEurope. Mu UK vanotengesa kwe £ 6.50 kusvika pa £ 17.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Aimbova Madrid Fan
Kufanana nemumwe mukomana wechikwata, Andres Iniesta akatsigira kambani yake, Albacete neBarcelona yaiva yechipiri chekupedzisira nekuti akanyatsonamata Michael Laudrup. Paakanga ava nemakore matanhatu chete, maCatalonia mauto akakunda mudiwa wake 7-1 uye akavaka ruvengo rwakasimba kune rumwe rutivi rwaigona kugutsikana nokuchinja kutendeseka kune vese vaivengwa zvikuru Real Madrid.
Kuchinja kwake mukuvimbika kwakazopiwazve apo Laudrup akatamira ku Real Madrid mu1994. Sezvakaratidzwa pepakutanga, Aiva baba vake avo vakamuita kuti ashamwaridzane ne FC Barcelona.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Zvinoremekedzwa
Sezvenguva yekunyora, Andres Iniesta hapana mubvunzo kuti anonyanya kuremekedzwa mumutambo muSpain. Waini yake inotengesa zvakanaka muMadrid, imba yevarwi vake.
MuCatalonia anoremekedzwa semukuru weBarcelona, ​​uye mune imwe nzvimbo yeSpain anoremekedzwa semurume uyo akakunda World Cup yeSpanish.
Uyezve, ndiye mumwe munhu wechiSpain wemhuri, iyo vanhu vanokoshesa. Uye haazobatanidzi mune kukakavadzana kwezvematongerwo enyika, izvo vamwe vanowanzoita Barcelona kana Real Madrid dzimwe nguva.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Akamboshuva FC Barcelona
Barcelona nyanzvi Andres Iniesta akanzwisisika kuti pakutanga haana kuda kupinda muCatalan club sechidiki pamusana pemhuri yake yakasimba neshamwari. Aida chinetso chitsva, chido chokuenda kure kumba.
Mumashoko ake, "Ndakanga ndisingadi kuuya nokuti ndakafunga mhuri yangu nehukama navo. Ndaifanira kuenda kune imwe nzvimbo kure kure pasina ivo, " Iniesta akaudza BeIN SPORTS.
Kuenda kwevhiki uye kutaura nababa vangu kwakaita kuti atendeuke.
Iniesta akapfuurira ..."Nababa vangu ndine chivimbo chikuru, zvakawanda zvehukama uye ndinoziva kuti paanondiudza zvinhu, anowanzobudirira. Ndinoremekedza baba vangu uye ini ndaiziva kuti ndaifanira kutora. Mushure mokunge ndasarudza kutamba FC FC, ndakaona mwedzi yakaipisisa yehupenyu hwangu semunhu, asi nekubatsira kwevanhu vose, zuva nezuva, zvaive zviri nani. "
Hazvina maturo kutaura, chisarudzo chaIesta chekutanga chinotyisa chakashanda zvakajeka zvakanaka.
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts-Nicknames ake mazhinji
Iniesta ane nicknamames akawanda. VeSpanish Press vanowanzoreva kwaari se Don Andres apo vamwe vanomudana El Ilusionista (The Illusionist) nekuda kwekukwanisa kwake uye kuda kwake kutamba mune chero chinzvimbo pachinzvimbo.
Vamwe vanomudana kuti El Cerebro (The Brain) nekuda kwehupenzi hwake hunoshamisa.
Mune chikwata cheGalcticos yeGal Madrid, ine pasi-ku-nyika Iniesta yakanziwo El Anti-Galactico.
Pakupedzisira, ruvara rwaInesta rwakave rwamuwanawo zita rezita (The Pale Knight).
Andres Iniesta Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts-Pane imwechete Yakachengetedza iAig Account
Andrés Iniesta anoshandisa Instagram semunhu wese. "Ndiri baba vanofarira kutora mifananidzo yevana vavo, zvokudya zvinonaka, uye zvivako zvinofadza," akanyora mune imwe nguva yapfuura Medium.
Rimwe zuva, Iniesta akangoerekana awana kambani yake yakasimudzwa, ne Instagram ichireva kuti pane imwe nzira yaikanganisa mitemo yebasa iri nemhuri, zvokudya, uye zvivakwa zvekuvakwa.
Iniesta akawana kuti zvisinganzwisisiki, uye mamiriro ezvinhu aingova nezvakawanda pamusoro pekunge Instagram yake iripo, pasina kunyeverwa, yakatsiviwa nomumwe Andrés Iniesta.
Iniesta akaedza kusvika kune Instagram kakawanda pasina mhinduro kubva kune kambani, kunyange mushure mokunge mapikicha ake apera uye zita rake rekushandisa rakapiwa kune mumwe munhu.
Asi pakupedzisira Instagram yakagadzira zvinhu zvakarurama, kudzorera nhoroondo yekutanga yaInesta uye kumanikidzira nyeredzi yebhokisi kune imwe, zita redu rinoshandiswa zvishoma.
Mumashoko yakapiwa kuna Gizmodo, Instagram haisi muhudziro pamusoro pekuti sei chinhu chakadai chakakwanisa kuitika nokukurumidza uye pasina chikonzero chakajeka kana chikonzero.
"Takaita chikanganiso pano uye takadzorera nhoroondo yacho pakarepo patakadzidza nezvazvo," iyo ikambani ikati. "Kukumbira ruregerero kunouya kuna Mr. Iniesta nokuda kwekutambudzika kwatakaita."